Iimpawu zekhamera ye-DP-22 ephathekayo eshushu kunye neqondo lobushushu elonyukayo le -20 ° C ukuya kwi-450 ° C kunye novakalelo lobushushu be-70mK yenza oku kulungele uhlolo olwahlukeneyo.
Ipip eyomeleleyo (umfanekiso emfanekisweni) umsebenzi ovumela ukuba umfanekiso we-IR ubekwe phezulu kumfanekiso obonakalayo weenkcukacha ezongeziweyo kwingxelo yakho.
Enye into eyongeziweyo yale khamera, isibane esinamandla se-LED esikuvumela ukuba uthathe imifanekiso ebonakalayo nakwindawo ezimnyama.
Nge-Wi-Fi esemgangathweni ngoku ungadlulisela imifanekiso yakho kwikhompyuter yakho. Oku kwenza ukuba ujonge, uhlele kwaye wenze iingxelo ngokulula.
I-DP-21 yeKhamera yokuThintela ukuThintela uHlaziyo
Ilungelo lokushicilela eli xwebhu lelika-Shenzhen Dianyang Technology Co, Ltd. Eli nqaku libhekisa kulwazi lobunikazi be-Shenzhen Dianyang Technology Co, Ltd., kwaye akukho yunithi okanye mntu unokusebenzisa okanye atyhile uxwebhu kunye nayo nayiphi na imifanekiso, iifom, idatha kunye nolunye ulwazi oluqulethwe kolu xwebhu ngaphandle kwemvume ebhaliweyo yeShenzhen Dianyang Technology Co, Ltd.
Uhlobo lwe-256 yekhamera ye-infrared thermal
Le mveliso inokusetyenziswa kwiifowuni eziphathwayo / kwiitafile, kwiikhompyuter nakwezinye izixhobo ezine-USB Type-C interface. Ngoncedo lwesoftware ye-APP yobuchule okanye isoftware yePC, ukubonakaliswa kwemifanekiso ye-infrared yexesha-lokwenyani, ukubonakaliswa kwezibalo zobushushu kunye neminye imisebenzi inokufezekiswa.
I-DYT Clip-on Thermal Scope N32-384
Nabani na, naphi na, nangaliphi na ixesha, omnye udubule zero, ngomzuzu omnye.
Umsebenzi ohamba ngesikhombisi esinye okhokelweyo
Umsebenzi omnye wemenyu yokuskrolela wenze ulawulo lomda wobushushu ngokulula. Unokusebenzisa iyunithi eneiglavu. Kwisikhokelo sokusebenza kwemenyu siya kukunceda ukhethe ukhetho olufanelekileyo ngalo lonke ixesha, ke, phumla kwaye udubule.
Imodyuli ye-imaging ye-thermal engapholiyo ye-M256
Isigqibo: 256 × 192
Isithuba sePixel: 12μm
I-FOV: 42.0 ° × 32.1 °
I-FPS: 25Hz / 15Hz
Imodyuli yokucinga ye-infrared thermal ye-M384
Ukucatshulwa kwe-infrared thermal kuphula ngokusebenzisa izithintelo ezibonakalayo ze-physics yendalo kunye nezinto eziqhelekileyo, kunye nokuphucula ukubonwa kwezinto. Yisayensi nobuchwephesha obuphezulu bale mihla, obudlala indima ebalulekileyo nebalulekileyo ekusetyenzisweni kwemikhosi yezomkhosi, kwimveliso yezemveliso nakwezinye iinkalo.
Imodyuli yokucinga ye-infrared thermal ye-M640
Ikhamera yokucinga ye-infrared thermal ye-DR-23
Ukuchaneka kokusebenza kunye nenqanaba lokuzenzekelayo le-infrared thermal system yokujonga ubushushu bomzimba kufanelekile kakhulu kuvavanyo lobushushu bomzimba olukhawulezileyo kwizikhululo zeenqwelo moya, izibhedlele, iindlela zangaphantsi, izikhululo, amashishini, izibuko, iivenkile ezinkulu kunye nezinye izihlandlo ezinokuhamba okukhulu. Okwangoku, ayizizo izikhululo zeenqwelo moya kuphela, izitishi kunye neenqanawa ezisebenzisa iithemomitha ezinobushushu ezizenzekelayo njengesixhobo sokuthintela ubhubhane, kodwa izikolo ezininzi, iivenkile ezinkulu, uluntu kunye namashishini nazo zisebenzisa iithemomitha ze-infrared njengokuhlola ubushushu kunye nezixhobo zokuthintela ubhubhane.
I-DP-32 yeKhamera yokuThintela ukuThintela uHlaziyo
I-DP-32 ye-infrared Thermal Imager kukujonga ngokuchanekileyo okuphezulu, okunokulinganisa ubungakanani bento ekujolise kuyo kwi-intanethi ngexesha lokwenyani, ukuvelisa ividiyo yomfanekiso oshushu kunye nokujonga imeko yexesha elingaphezulu. Ukuhamba nesoftware yeqonga ehambelanayo eyahlukeneyo, inokuba ilungele iindlela ezahlukeneyo zokusetyenziswa (ezinje ngomlinganiso wesixhobo esisebenza ngombane, ialam yomlilo, imilinganiselo yomntu kunye nokuhlola). Olu xwebhu luzisa kuphela iimowudi zokusetyenziswa kwemilinganiselo yomzimba womntu kunye nokuvavanywa.
Imodyuli yokucinga ye-infrared thermal ye-SR-19
Ikhamera eshushu ye-infrared ye-Shenzhen Dianyang Ethernet yi-infrared radiometric infrared imager eshushu. Imveliso yamkela izixhobo zokungena ngaphakathi, ezinomsebenzi ozinzileyo kunye nokusebenza ngokugqwesileyo. Ixhotywe ngobuchule bokulinganisa ubushushu obukhethekileyo kunye nokusebenziseka ngokulula komsebenzisi. Yincinci ngobukhulu, ukukhanya ubunzima kwaye ityebile kunxibelelwano. Kufanelekile kulawulo lomgangatho, ukujonga umthombo wobushushu, umbono wokhuselo ebusuku, ukugcinwa kwezixhobo njl